'उद्देश्यहीन पेशेवर राजनीतिकर्मीको जमातले देश अन्योलमा परिरहेको छ'
‘उद्देश्यहीन पेशेवर राजनीतिकर्मीको जमातले देश अन्योलमा परिरहेको छ’
बिनोद पौडेल, संयोजक-अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज, अस्ट्रेलिया
नयाँ शक्तिमा किन लाग्नुभयो ?
नयॉं शक्तिमा मलाई मूलभुतरुपमा पाँच ‘स’को मान्यताले बिशेष आकर्षित गर्‍यो । देशको समृद्धिको लागि एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयको खाँचो म नेपाल मै हुँदा र विदेशमा बस्दा पनि महसुस गरिरहेकै बेलामा नयाँ शक्तिको अभियान देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुबीच लोकप्रिय बनाउने कार्यमा आफुलाई स्थापनाकालदेखि नै अभियन्ताको रुपमा सहभागी भएँ । हामी समृद्ध देश अनि समाज आफ्नै पालामा देख्ने अभिलाषाका साथ अघि बढिरहेका छौं। व्यवस्था भन्दा पनि समाजको अवस्था बदलने महाभियानमा सबै अभियन्ता अनि सहयात्री साथीहरुको साथमा लागेको छु । आजको दिनमा देश विदेशबाट नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच र प्रशस्त पुँजी भित्र्याएर तिव्र गतिमा देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने अठोटका साथ नयाँ शक्तिको महाअभियानमा लागेको हुँ ।
तपाईले बुझ्नुभएको नयाँ शक्ति के हो ?
नेपालमा अहिलेसम्मका परिवर्तनहरुले धेरै व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरे र अलिअलि मात्र देशको अवस्था परिवर्तन भयो । संसारमा भईराखेको आमुल परिवर्तनको रफ्तारलाई समाती विकसित देशहरुमाझ आफुलाई उभ्याउनको लागि नेपालको विकासको रफ्तार ‘दिन दुईगुना र रात चौगुना’ गरी अघी जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्को लागि पुरानो शैलीलाई सुधार गरी नयाँ परिवर्तित शैली अंगालेर अघि बढ्नुपर्दछ । हो, नयाँ शक्ति त्यही वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो जसले देशमा चाहिने आमुल परिवर्तनको खाका तैयार गरिरहेको छ । सारमा भन्दा नयाँ शक्ति पुरानो राजनीति र राजनीतिक संस्कारबाट वाक्कदिक्क भइरहेका जनताका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो, विकल्प बन्नेगरी अगाडि बढिरहेको छ ।
प्रवास अझ विशेषगरी अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित राष्ट्रबाट हेर्दा नेपालको राजनीति कस्तो देखिन्छ ?
अलि फरक देखिन्छ । अलि दु:खलाग्दो देखिन्छ, चित्त दुख्छ, अनि कता-कता उद्देश्यहीन पेशेवर राजनीतिकर्मीहरुको जमातले देश अन्योलमा परेको जस्तो देखिन्छ । हामीले हाम्रो राजनीतिक संस्कार, बुझाई र परम्परालाई नै नयाँ युगको आवश्यकताअनुसार फेर्नु पर्नेछ । त्यसको लागि नयाँ पुस्ताले नेतृत्वकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
के नेपालमा परम्परागत राजनीतिको विकल्प चाहिएकै हो त ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अपरिहार्यता महसुस भएको छ । अब देश बनाउनु पर्छ नत्र हाम्रो आउँदो नयाँ जेनेरेशनले हामीलाई धिक्कार्ने छन् । हाम्रै पालामा आमुल परिवर्तन ल्याउन र समृद्ध नेपाल बनाउन नेपालमा परम्परागत राजनीतिको विकल्प चाहिएकै छ र नयाँ शक्तिले त्यो विकल्प दिने अभियानको नेतृत्व लिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज नयाँ शक्तिको भातृ संगठन हो ? यसले नेपालकाे वैकल्पिक राजनीतिलाई कसरी सघाउन सक्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज नयाँ शक्तिको प्रवास प्रदेशिक परिषद आन्तर्गतको प्रवासस्थित भातृ संगठन नै हो । यसले समृद्ध नेपाल बनाउने नयाँ शक्ति नेपालको अभियानलाई समर्थन गर्नुका साथसाथै प्रवासमा छरिएर बसेका नेपालीको समृद्धिको लागि नयाँ शक्ति नेपाललाई भरोसा अनि समर्थन गर्ने नेपालीहरुलाई एकैथलोमा ल्याई अभियानलाई साथ र परेको बेलामा नेपालमा केही गर्ने र सहयोग जुटाउन पहल गर्दछ। त्यति मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाली समाजलाई परेको बेला सहयोग गर्दछ । विदेशमा हाम्रो भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गरी दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सधैं अघि सर्दछ ।
विभिन्न देशमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजमा आवद्ध नेपालीहरुले विदेशको विकास देखेका छन् । नयाँ प्रविधिसँग खेलेका छन् । यसर्थ, उहाँहरुले नेपालमा विभिन्न किसिमबाट स्रोत, साधन र सीपलाई नेपालको विकासक लागि प्रयोग गर्दछ र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाका साथ अघि सरेको नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अर्थात् नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीलाई धेरै तरिकाले सघाउन सक्छ ।
नेपालको समृद्धिमा एनआरएनको भूमिका कस्तो होला ?
नेपालको समृद्धिमा प्रवासी नेपालीहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । उनीहरुसँग विदेशमा सिकेको ज्ञान, अनुभवका साथसाथै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि चाहिने पुँजी जम्मा गर्ने क्षमता देशमा रहेका अरु जनताभन्दा अलि बढी हुनेहुँदा समृद्धिको लागि चाहिने मूलभुत कुराहरुमा प्रवासी नेपालीहरुले ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछन् । जस्तो कि चीन र भारतको विकासमा डायस्पोराको भूमिका प्रसंशनीय रहेको पाइन्छ।
डायस्पोराबाट नेपालमै आएर नेपालको समृद्धिलाई सघाउने कुनै योजना छ कि ?
हुन त आधुनिक प्रविधी र विज्ञानले गर्दा संसार एउटा सानो बस्तीझैं भएको छ । आज समाजसेवा गर्दा एउटा भौगोलिक सीमानभित्र मात्र सिमित भइराख्नु पर्दछ भन्ने छैन । कुन ठाउँमा बस्ने भन्दा पनि कुन ठाउँको समृद्धिका लागि काम गर्ने भन्ने कुराले बढी महत्व दिन्छ । त्यही पनि जुन उद्देश्य राखेर विदेसिए पनि त्यो ठाउँको विकास देखेर, प्रविधि सिकेर, ज्ञान, सीप र धारणा हासिल गरेर आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन्छु ।
तर समय र परिवेशले साथ दियो भने केही बर्षमा जिम्मा लिएका काम अनि व्यवहार पूरा गरी देशमै फर्कन्छु । नेपालमै आएर नेपालको समृद्धिलाई सघाउने ठुलो इच्छा छ । विदेशमै रहेर पनि एउटा महान अभियानमा लागिसकेकोले नेपालको समृद्धिलाई सघाउन आफूले सक्दो सहयोग सबै तिरबाट गर्ने र जुटाउने कोसिस गर्छु ।
अन्तिममा केही सन्देश ?
देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली र विशेष गरी युवा साथीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजको एक्काइसौं शताब्दीको समाजको आवश्यकतालाई युवा पुस्ताले राम्ररी बुझ्न सक्दछ र युवा जोश र जाँगरबाट मात्र यो सम्भव छ । युवा अवस्थामा मानिसको शारिरिक र मानसिक अवस्था यति बलियो हुन्छ कि उसले ‘जे पनि गर्न सक्दछु’ भन्ने भावनाको विकास गरेको हुन्छ । त्यसैले बलियो विचार अनि भावना बोकेका युवाहरु अघि आउनु भयो भने सुन्दर र समृद्ध समाज अनि देशको निर्माण गर्न सकिन्छ । आउनुहोस्, यस महान अभियानमा सँगसँगै अघि बढौं ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाजclose